I-KingTai Inkampani iyimveliso ebanzi yokuthengisa edibanisa imveliso kunye nokuthengisa.Sinomzi mveliso wethu kunye neqela lokuthengisa phesheya, umzi-mveliso wethu ubekwe kwiHui Zhou City kwiPhondo laseGuangdong.
I-KingTai Inkampani iyimveliso ebanzi yokuthengisa edibanisa imveliso kunye nokuthengisa.Sinomzi mveliso kunye neqela lethu lokuthengisa phesheya, umzi-mveliso wethu ubekwe kwiHui Zhou City eGuangdong kwiPhondo. Inkampani yethu ngaphezu kwama-20 ewe ...
Yintoni umgangatho wemveliso?
"Umgangatho wemveliso uthetha ukudibanisa amanqaku anokukwazi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kwaye anike ukoneliseka kwabaxhasi ngokuguqula imveliso ukubenza bakhululeke kwiintsilelo okanye iziphene." Kwinkampani: Umgangatho wemveliso ubaluleke kakhulu kwinkampani. Kungenxa yokuba, iimveliso ezingalunganga zomgangatho w ...